कसरी ढल्यो इच्छाराजको साम्राज्य ? अर्बौं सम्पत्तिसहित श्रीमती कहाँ छिन् ? - Pardafas
कसरी ढल्यो इच्छाराजको साम्राज्य ? अर्बौं सम्पत्तिसहित श्रीमती कहाँ छिन् ?
केही वर्षअघि रियलइस्टेटबाट उदाएर विभिन्न क्षेत्रमा हात हालेका व्यवसायी सुधीर बस्नेतको पतनको कथा धेरै थाहा होला । ‘पावर टु सक्सिड’ नाम राखेर किष्ट मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स स्थापना गरी बैंकिङ क्षेत्रमा राज नै गर्न थालेका कमल ज्ञवालीको नाम पनि धेरैका लागि परिचित नै छ । उनी घरजग्गातर्फ लगानीबाट आफू मात्र डुबेनन्, धेरैको लगानी डुब्यो, बैंक नै धराशयी भयो ।
यस्तै, तीव्र महत्वाकांक्षाले अर्का एक व्यवसायीको पनि साम्राज्य पतनको क्रममा पुगेको छ । तिनी हुन्, रियलस्टेट कारोबारी इच्छाराज तामाङ ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को हिरासतमा अहिले चर्चित रियलइस्टेट कारोबारी इच्छाराज तामाङ छन् । उनको परिचय यतिमा मात्र सीमित छैन । उनी बैंकर, व्यवसायी र पूर्वसांसद पनि हुन् ।
ओखलढुंगाका तामाङले रुसमा सिभिल इन्जिनियरिङ पढे । घरजग्गा व्यवसायमा हात हाले । सिभिल होम्समार्फत अपार्टमेन्ट तथा हाउजिङ बनाए । त्यसबाट सफलतासँगै उनले सहकारी, बैंक, मल लगायतमा लगानी गरे । विस्तारै उनी सफल र उदाहरणीय व्यवसायीको रुपमा चर्चित हुँदै गए ।
तर, तीव्र महत्वाकांक्षाले निर्माण गरेका हाउजिङ परियोजना विक्री हुन नसकेपछि भने उनी धराशायी हुन थाले । उनले सहकारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ठूलो रकम लिएर घरजग्गा व्यवसायमा लगाएका थिए । त्यहाँ घाटा लाग्नेबित्तिकै उनले आफ्नै सहकारीबाट लिएको ऋण तिर्न सकेनन् । समयमै निक्षेपकर्ताले रकम नपाएपछि उनीमाथि ठगीको आरोप लाग्यो ।
यसरी सुरु भयो पतन
तामाङले आफ्नै सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी संस्थाबाट बचतकर्ताहरुको रकम चलाएर हिनामिना गरेका हुन् । तामाङले संस्थाको ७ अर्ब ३६ करोड ३८ लाख रुपैयाँ आफ्नो निजी पैसा जस्तो गरी चलाएर हिनामिना गरेको पाइएको छ ।
आकर्षक ब्याज दिने प्रलोभनमा पारेर संस्थाले निक्षेपकर्ताबाट रकम उठाएको थियो । बजारमा चलेको भन्दा बढी ब्याज दिने भएपछि धेरै व्यक्तिले लाखौं रुपैयाँ संस्थामा राखेका थिए ।
त्यसमाथि १५ लाख रुपैयाँसम्म राखेमा अपार्टमेन्ट लगायत पाउने प्रलोभनमा पारिएको एक पीडितले बताए । ‘त्यस्तो रकम ३ वर्षसम्म चलाउन पाइँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘दुःख गरी कमाएको रकम अहिले पाउन नसकेर सास्ती खेप्नुपरेको छ ।’
अर्का एक पीडितका अनुसार निक्षेपकर्ताहरुको भीड लागेपछि संस्थाले १०/१५ हजार गरेर रकम फिर्ता गर्न थालेको थियो । ‘एउटै व्यक्तिले करोडसम्म राखेका छन्, केही हजार रुपैयाँ किस्तामा पाएर कहिले त्यत्रो रकम फिर्ता पाउने ?’ उनले भने ।
उनका अनुसार संस्थामा अवकाशप्राप्त कर्मचारी, बुढाबुढी, बिरामीलगायतले रकम जम्मा गरेका थिए । ‘कति जना बचतकर्ता ६५ देखि ९५ वर्षसम्मका छन् । कति जना बचतकर्ता बिरामी भएको बेला अपरेसन गर्न र औषधि किन्न नपाएर मरिसके,’ ती पीडितले भने ।
सिभिल सहकारीका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठ सिभिल होम्सको सञ्चालकको पदमा छन् । तामाङ र श्रेष्ठ नाताले भान्जी ज्वाइँसमेत हुन्, जसका कारण तामाङलाई सहकारीको पैसा चलाउन सहज भएको हो ।
तीन कम्पनीका लागि ऋण
तामाङले सिभिल ग्रुद्वारा प्रवर्द्धिधत सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट आफ्ना तीन कम्पनीका लागि उक्त ऋण लिएका हुन् । सहकारीमा दुई हजार ६ सय ९० सदस्य सदस्य छन् ।
सहकारीको आव २०७४/७५ को अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार संस्थाले आठ अर्ब १३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ कर्जामध्ये सिभिल होम्स प्रालि, सिभिल अपार्टमेन्ट प्रालि, सिभिल इस्टेट प्रालिमा गरी सात अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ लगानी गरिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको रोक्का
२०७६ माघमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले तामाङको सम्पत्ति छानबिनका लागि रोक्का गरेको थियो । धेरै सम्पत्तिको स्रोत खुल्ने आधार नभेटिएपछि रोक्का गरिएको हो ।
अनुसन्धानको क्रममा विभिन्न २४ वटा कम्पनीमा उनको लगानी देखिएको थियो । सिभिल होटेल, सिभिल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कम्पनी, कोत्से भैरव बहुउद्देश्यीय कम्पनीलगायत कम्पनीको सेयरसमेत विभागले रोक्का राखेको थियो । सिभिल बैंकबाहेक अरू सबै कम्पनी घाटामा देखाएर करसमेत तिरिएको थिएन ।
उनले श्रीमतीको नाममा संस्थापक सेयर राष्ट्र बैंकको नियमविपरीत करिब १० करोड रुपैयाँबराबरको बिक्री गरेका थिए । श्रीमान् बैंककै अध्यक्ष भएको अवस्थामा सो सेयर बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
सम्पत्ति बेचे, तर पीडितलाई दिएनन्
आर्थिक संकटमा परेपछि तामाङले आफ्नो सम्पत्ति विक्री गर्न थालेका थिए । उनले सुन्धाराको आर्मी अफिसर क्लब अगाडिको सीटीसी मल र चाइना टाउनछेउको जेडीए कम्प्लेक्स बिक्री गरेका थिए ।
तामाङले उक्त सम्पत्ति १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँमा व्यवसायी अजयराज सुमार्गीलाई बिक्री गरे । अपार्टमेन्ट विक्री हुन नसकेपछि सिभिल ग्रूपले होटल बनाउने तयारी गरेको थियो । तर, होटलमा थप लगानी गर्न नसकेपछि तामाङले सस्तो मूल्यमै जेडीए कम्प्लेक्स बिक्री गरे । कम्प्लेक्स रहेको ६ रोपनी जग्गामा १२ तलाको अपार्टमेन्ट छ ।
सम्पत्ति बेचे पनि तामाङले पीडितको रकम भने नदिई भागीभागी हिँडिरहेका थिए ।
श्रीमतीको नाममा अर्बौं सम्पत्ति
सीआईबीले तामाङलाई पक्राउ गरेपछि उनको श्रीमती भने फरार छिन् । श्रीमतीसँग उनको डिभोर्स भए पनि अंशवण्डा गरेर श्रीमतीको नाममा घरजग्गा राखेको पाइएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका अनुसार उनकी श्रीमती सिर्जना शाक्यका नाममा कीर्तिपुरमा १५ रोपनी जग्गा भेटिएको छ । कीर्तिपुर नगरपालिका–१ ट्याङलाफाँटस्थित कम्पाउन्ड घेरेको उक्त जग्गामा घर पनि छ ।
आफू विभिन्न समस्यामा पर्दै गएपछि तामाङले श्रीमतीसँग डिभोर्स गरी सम्पत्ति सुरक्षित गरेका थिए । श्रीमतीसहित अरु आफन्तको नाममा अरु पनि सम्पत्ति हुन सक्ने भन्दै सीआईबीले अहिले छानबिन गरिरहेको छ ।
सीआईबीले तामाङविरुद्धको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । तामाङसहित १२ जना पक्राउ परेको ४० दिनभन्दा बढी भइसकेको छ । हालसम्म साढे ५ अर्ब बिगो दाबीसहित १४ सय ११ उजुरी आइसकेको सीआईबीका सहायक प्रवक्ता डीएसपी सुकदेव खनालले पर्दाफासलाई जानकारी दिए ।
‘उनीहरुको आफन्तसँग भएको सम्पत्ति विवरण पनि खोजिरहेका छौं, अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ । केही दिनमा नै अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाउँछौं,’ उनले भने ।
प्रहरीले संगठित मुद्दामा उनीहरुविरुद्ध अनुसन्धान गरिरहेको हो । पक्राउ पर्ने अन्य व्यक्तिमा सिभिल सहकारीको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठ, सहजकर्ता प्रबन्धक भगवान बहादुर सिंह, जुनियर असिस्टेन्ट म्यानेजर मायोनानी महर्जन छन् ।
यस्तै जुनियर असिस्टेन्ट म्यानेजर एलिना तुलाधर, जुनियर अधिकृत शंकरप्रसाद पाठक, असिस्टेन्ट संगीत श्रेष्ठ, लेखा अधिकृत राकेश महर्जन, जुनियर सहायक प्रबन्धक बुद्धराज तामाङ पनि पक्राउ परेका छन् । जुनियर सहायक प्रबन्धक कौस्तुभ केतन ढुंगाना, सिभिल होम्सका वरिष्ठ प्रबन्धक विजय विक्रम शाह, पूर्व लेखा समिति सदस्य हरिहर लामिछानेलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
मङ्सिर २३, २०७८
कसरी ढल्यो इच्छाराजको साम्राज्य ? अर्बौं सम्पत्तिसहित श्रीमती कहाँ छिन् ? - Pardafas pphrycbptn http://www.g0xeo248w599ptkgub8m41y19z7fw410s.org/ apphrycbptn [url=http://www.g0xeo248w599ptkgub8m41y19z7fw410s.org/]upphrycbptn[/url]
कर्णालीमा मुख्यमन्त्री जोगाउन एमाले सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गर्लान् ?
प्रधानमन्त्री देउवा भाइब्रेन्ट गुजरातमा सहभागी हुने, यसैलाई राजकीय बनाउने बिषयमा छलफल